सम्पादक गुरुङले जन्मदिनको अवसरमा दुबै हात गुमाएका कुमाललाई सहयोग – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः १२ चैत्र २०७५, मंगलवार १८:४९ March 26, 2019 हातेमालो संवाददाता
बाँके । विद्युतिय दुर्घटनामा परी दुबै हात गुमाएका राप्तीसोनारी गाँउपालिका १ कुशुम निवासी सुरेश कुमाललाई काँचुली मिडिया प्रा.लि. का अध्यक्ष एवम् सम्पादक गजेन्द्र गुरुङले आज आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ । काँचुली खबर अनलाईन पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेका गुरुङले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर कुमाल दम्पत्तीलाई १० हजार रुपैया सहयोग गर्नु भएको हो ।
कुमालको २०६९ फागुन १२ गते विद्युतिय दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो । कामको सिलसिलामा लमजुङ पुगेका कुमाल स्काभेटरको सहचालकका रुपमा काम गर्नु हुन्थ्यो । स्काभेटरको ग्रिस बदल्ने क्रममा विद्युतको नाङ्गो तारमा अल्झीएका कुमालले आफ्ना दुबै हात गुमाउनुपर्यो । कोहलपुरमा रहेको अनलाईनको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कुमाल दम्पत्तीलाई सहयोग प्रदान गरिएको हो ।
सम्पादक गुरुङले जन्मदिन लगायतका उत्सवहरुमा हुने गरेको फजुल खर्च सामाजिक कार्यमा लगाउन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो । ‘विभिन्न उत्सवमा हुने गरेको फजुल खर्च सामाजिक कार्यमा लगाऔं’ सम्पादक गुरुङले भन्नु भयोे, ‘तपाईको सानो सहयोगले कसैको भविश्य निर्धारणमा ठुलो मद्धत्त पुग्नेछ ।’
काँचुली मिडिया प्रा.लि. को नेतृत्वमा आर्थिक संकलन अभियान संचालन गरिएकाले अभियानमा सहभागी हुन गुरुङले सबैलाई आग्रह समेत गर्नु भयो । कार्यक्रममा नेकपा ५ नं. प्रदेश कमिटिका सदस्य पुजन विश्वकर्मा, पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदिप वाग्ले, प्रेस चौतारी बाँकेका अध्यक्ष हेमन्त वि.क., प्रेस सेन्टर बाँकेका अध्यक्ष डक्ट प्रसाद धिताल लगाएतले आ(आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन ।
काँचुली मिडिया प्रा.लि.ले संचालन गरेको अभियानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले थोरै भएपनि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको रावतले बताउनु भयो ।
आज जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रणेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती
रात्री कबड्डी प्रतियोगितामा वडा नम्बर ३ र ८ ‘ए’वाकओभरमा बीजयी